नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : दसैँ–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वका मुखैमा धुरु धुरु रुँदै परदेश जाने नेपालीहरुको लाइन र आँशुले छुँदैन है तिमीहरुलाई ??
दसैँ–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वका मुखैमा धुरु धुरु रुँदै परदेश जाने नेपालीहरुको लाइन र आँशुले छुँदैन है तिमीहरुलाई ??
दसैँ–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वमा मुलुक बाहिर रहेका अधिकांश मानिस स्वदेश फर्किने र घरपरिवारमा रमाइलो गरी मनाउने गरिन्छ । तर कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाकाबाट दसैँको पहिलो दिन आज पनि मजदूरीका लागि भारत जाने धेरै भेटियो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण स्वदेश फर्किएकाहरु चाडपर्वको मुखमा पुनः
रोजगारीका लागि भारत गइरहेका हुन् । कोरोनाको दोस्रो लहर सामान्य बन्दै गएसँगै यहाँबाट मजदूरीका लागि बाहिरिनु बाध्यता रहेको पीडा जानेबाट सुनिन्छ । “दसैँको टीका छाडेर जाने रहर हामीलाई पनि कहाँ थियो र !” बिहीबार बिहान भारतको सिमला जाँदै गरेका डडेल्धुराका राजबहादुर बुढाऐरले भन्नुभयो, “छाक टार्न समस्या भए पनि के दसैँ के तिहार ।”
कोरोना सङ्क्रमण बढ्दा गत चैतमा स्वदेश आएका उहाँले गाउँमा बेरोजगार बस्दा परिवार पाल्न समेत धौधौ भएको बताउनुभयो । राससका अनुसार दसैँ–तिहार भन्दा पनि कोरोना सामान्य बन्दै जाँदा नोकरीका लागि भारत जाने गाउँबाट पलायन हुने क्रम बढिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डाचौकीका प्रहरी नायब निरीक्षक जीवन गुरुङले घटस्थापनाको दिन यस नाकाबाट एक सयभन्दा बढी नेपाली मजदूरीका लागि भारततर्फ गएको बताउनुभयो । “आउने बढिरहेको भए पनि जाने क्रम दसैँले छेकेको छैन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले चाडपर्वका बेला हुने आपाराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा पनि सक्रियता बढाएका छौं ।” उहाँले अहिले सीमा नाकामा सुरक्षा जाँचका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट कुकुरसमेत परिचालन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विगत एक सप्ताहको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक रुपमा २५० देखि ५००/६०० सयसम्म नेपाली नागरिक मजदूरीका लागि भारततर्फ जाने गरेका छन् ।
यता काठमाडौंमा बिहीबार बिहान पौने पाँच बजे । राम्ररी उज्यालो नहुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहिर चहलपहल बढिसकेको थियो । कोरोना संक्रमण नभएको रिपोर्टमा छाप हान्न यात्रुहरु विमानस्थलको एक नम्बर प्रवेश गेट अगाडि लाइन लागेका थिए ।
त्यही लाइनमा भेटिए खोटाङका मिलन रसाइली । अनलाइन खबरका अनुसार रातो टीकाले निधार रंग्याएका उनको काँधमा दुईवटा खादा र माला थियो, तर अनुहार मलिन थियो । मिलन दशैं शुरु भएको घटस्थापनाको दिन रोजगारीका लागि साउदी अरब उड्दै थिए ।
ठूलो चाडपर्वको मुखैमा विमानस्थलसम्म पुर्‍याउन आएका श्रीमती र छोरी भक्कानिएपछि आफू सम्हालिन नसकेको मिलनले अनलाइनखबरलाई सुनाए । ‘छोरी र श्रीमतीलाई बिदाइ गर्दा मन सम्हाल्न सकिन, के–के भयो भयो,’ मिलनले आँशु पुछ्दै भने ।